Umtsalane weNdaba eziMbini zokuGetaway kuSapho
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguCarli
Eli khaya linomtsalane linemigangatho emibini liphinde lenziwa ngokutsha ngendlu emhlophe, eqaqambileyo yasefama idibana nesitayile seShabby chic. Inamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elinye eligcweleyo phantsi. Umgangatho ophezulu unebhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo.
Eli khaya lipholile kwaye liyathandeka .... ikhaya eligqibeleleyo kude nekhaya. Ibhonasi, kukho ikhabethe yabantwana efihliweyo phantsi kwezitebhisi ezifikelelekayo kwigumbi lokulala elingaphambili, elilungele ukugcina abantwana bonwabile.
Kubandakanya amagumbi okulala amathathu kunye nesofa, ikhaya lingalala ngokukhululekileyo abantu abathandathu. Ndinganikeza umatrasi womoya wobukhulu bendlovukazi ukongeza ezimbini.
48" HDTV ene-I-Roku
4.93 ·Izimvo eziyi-27
4.93 · Izimvo eziyi-27
Indlu ikwiikhilomitha nje ukusuka kwiReservoir, iimayile ezintathu ukusuka kwivenkile yaseFlowood, iikhilomitha ezisibhozo ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseJackson, kunye neekhilomitha ezili-12 ukusuka eDowntown Jackson. Likhaya eligqibeleleyo elikufutshane nayo yonke into, ukanti linemvakalelo ezolileyo kwindawo epholileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Carli
Ujoyine nge- 2017 Okthoba
Ndihlala kufutshane kwaye ndiyafumaneka ukuba kukho into oyifunayo. Ndingakunika indawo eninzi njengoko ufuna, kodwa ukuba ufuna ukuhlalisana, ndingabakho. Ndiyakuthanda ukwenza abahlobo abatsha.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 15:00 - 20:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brandon